नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पत्रकारिता जब रक्सीको बोत्तल र पैसामा बिक्छ तब वास्तविक आमाहरु यसरी दशधारा रुनुपर्ने दिन आउँदो रहेछ, कठै हाम्रो नेपाली पत्रकारिता ! कठै ति कलम समाउने अपराधी हातहरु !!!
पत्रकारिता जब रक्सीको बोत्तल र पैसामा बिक्छ तब वास्तविक आमाहरु यसरी दशधारा रुनुपर्ने दिन आउँदो रहेछ, कठै हाम्रो नेपाली पत्रकारिता ! कठै ति कलम समाउने अपराधी हातहरु !!!
केही गलत पत्रकारहरुले गर्दा सिँगो नेपाली पत्रकारिता माथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, किन बोल्दैन नेपाल पत्रकार महा संघ ??
यौन दुराचारको आरोप झेलिरहेकी दिलशोभाको फोन रेकर्डमा उल्लेख गरिएको मन्दिरअगाडि पुगेर म उभिएँ । कालिमाटीको व्यस्त सडक छेवैमा रहेको गणेश मन्दिरछेउ म जिन्सपाइन्ट र नर्थफेसको कालो ज्याकेटमा थिएँ । तर मलाई कसैले बोलाएन न कोही लिन नै आए । शनिबारको सिमसिमे झरीले रुझाउन थालेपछि कथित आरोपले छटपटाइरहेकी दिलशोभालाई सम्झदै ब्लक छापेको गल्लीभित्र छिरेँ । फोन रेकर्डअनुसार यही गल्लीबाट बाहिर उभिएकी महिलालाई लिन कोही आउनुपथ्र्यो, तर यहाँ कोही आएनन् । मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडि घरको भुइँतलाको कोठामा पुग्दा खाटमा पल्टिरहेकी एउटी वृद्धा देखिइन् । धुम्म परेको दिन झनै लोडसेडिङले गर्दा कोठा मधुरो थियो । अनुहार चाउरी परेकी, निकै दुब्ली अँध्यारामा पनि निकै गोरी देखिन्थिन् । उनी मसँगैको सोफामा बसिन् र मेरा दुवै हात च्याप्प समाइन्, 'लौ बाबु, दिलशोभा नानीलाई जोगाउनुपर्‍यो, मेरो कारणले उनको जिन्दगी नै खेर जाने भयो, उनले जीवनभरि गरेका पुण्यजति सबै बालुवामा पानी हालेजस्तै भए ।' उनका आँखाबाट खसेको आँसुले मेरा औंलाहरू भिजे । म चुपचाप सुनी मात्रै रहेँ ।
उनी थिइन्, ७९ वर्षीया राधिका मानन्धर । पछिल्ला केही दिनयता सबैको ध्यान केन्दि्रत गर्दै आएको समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठको 'यौन दुराचार' प्रकरणकी अर्को मुख्य पात्र । दिलशोभाले यिनै वृद्धाकहाँ राति सुत्नका लागि आमाघरका महिला पठाइदिएकी थिइन् सहयोगका लागि । खबर प्रकाशित भयो, दिलशोभाले यौन दुराचारका लागि आमाघरका महिलाहरू राति अन्यत्र सुत्न पठाउँछिन् भनेर । यत्रो प्रकरणमा मुछिएकी यी वृद्धा थिइन् मेरी श्रीमतीकी हजुरआमा अर्थात् मेरी बूढी सासू ।
वसन्तपुरदेखि पश्चिमतर्फ रहेको चसान्द टोल पुख्र्याैली भएका मानन्धरहरू धेरै पहिल्यै कालिमाटी झरेर व्यापार-व्यवसायमा सामेल थिए । मेरा बूढा ससुरा हरिहर मानन्धरका बाजेहरू पनि त्यो बेलाको सहरी घेरा मानिने विष्णुमती काटेर कालिमाटीमा व्यापार जमाउन आइपुगे । बाजे-ससुराका पालामा उहाँको परिवार चि साहु अर्थात् नुन व्यापारीका नामले त्यो क्षेत्रमा प्रसिद्धी कामाएका थिए । खाद्य संस्थानको चामल, आयल निगमको मट्टितेल र साल्ट ट्रेडिङको आधिकारिक बिक्रेता भएकाले समाजमा यो परिवारको स्थान उचो थियो ।
बाहिर सिमसिमे पानी अझै रोकिएको थिएन, आधाजसो रुझेका कपडा टकटकाउँदै अधबैंसे उमेरकी एउटी महिला कोठाभित्र छिरिन् । 'ए मिरा, आयौ ?' राधिका माले यति भन्दा-नभन्दै हातको सानो ब्याग कुनामा राखेर हामी दुवैलाई उनले नमस्कार गरिन् । 'बाबुले चिन्नुभयो ? पत्रिकामा नाम आएको नानी यिनै हुन् नि ।' अस्ति दिलशोभाले नचाहिने काममा लगायो भनेर भन्ने । धर्मकुमारी थापा, अर्थात दिलशोभाले राति मेरी बूढी सासूकहाँ राति सुत्नका लागि पठाइदिएकी सहयोगी । उनी शान्त थिइन्, फुङ्ग उडेको उनको अनुहारमा कुनै शृङ्गार थिएन, न त गरगहना नै । राधिका मा बोलिरहँदा उनी हाम्रो कुरा सुनेर बसिरहिन् । कालिमाटीका घरमा उनलाई सबैले मिरा भन्थे । दुई हप्ताअघि मात्रै मैले पहिलोपटक उनलाई भेटेको थिएँ । बिहानै मारवाडी साहुकहाँ सुरक्षाकर्मीको काम गर्थिन्, त्यहाँबाट मासिक आठ हजार तलब आउँथ्यो । उनी भन्थिन्, 'दसैं-तिहार चाडबाड केही भन्न नपाइने । त्यसपछि आमाघर गयो, दस किलो चामलको भात पकाएर साँझ नछिप्पिँदै कालिमाटी कुरुवा बस्न आउने ।' उनकी एउटी छोरी थिइन्, उनी होस्टलमा बसेर १२ कक्षा पढ्थिन्, त्यतिखेर म सबैभन्दा यही कुराले प्रभावित भएको थिएँ, 'हजुर मलाई खानबस्न त मिलेकै छ, यो कमाइले छोरीको फिस र होस्टल खर्च धानेको छु ।' त्यो दिन उनी उत्साहित देखिन्थिन् ।
मिरा दिदीलाई यसो हेरेँ, उनी केही नबोली एकोहोरो मलाई हेरिरहेकी थिइन् । 'मैले त माफी मागे हुन्छ भनेको बाबु, तर यो मिरा त मान्दै मान्दिन, यिनीहरूलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ पो भन्छे,' मा बोल्नुभयो । मिरा दिदी बोलिन्, 'अड्डा-अदालत कहाँ जानुपर्ने हो, जाने हो सर । हामी दुःखी मानिसलाई झनै दुःखी बनाउने । हाम्रो इज्जतमाथि खेल्ने । हाम्रा लागि पनि न्यायनिसाफ त बाँचेकै होला नि,' उनी आक्रोशित बनिन् ।
मिराको कुरा सुनेपछि मैले दिलशोभालाई फोन गरेँ । उहाँको स्वर दबेको र निकै थाकेजस्तो लाग्थ्यो । म राधिकाको नातिनी-ज्वाइँ भनेर परिचय दिएपछि उहाँ फोनैमा रुन थाल्नुभयो । 'खै बाबु के सोचेर आमाको सेवा गरूँ भनेको थिएँ, के भयो-भयो,' उहाँ झन् रुन थाल्नुभयो । मैले दिलशोभालाई कहिल्यै भेटेको छैन, टाढाबाट देखेको मात्रै थिएँ, फोनमा बोलेको पनि यो नै पहिलोपल्ट थियो । तर उहाँको सामाजिक कामका बारेमा चाहिँ मलाई जानकारी थियो । मलाई यति जानकारी पनि थिएन कि राधिका मा बेला-बेला बस्न जाने वृद्धाश्रम त्यही दिलशोभाकै हो भन्ने पनि ।
फोनमा दिलशोभाले भन्नुभयो, 'बाबु, आमा आफ्नो घरको त्यत्रो सुखसुविधा त्यागेर पनि हामीकहाँ रमाएको देख्दा मलाई औधी खुसी लाग्थ्यो । म उहाँलाई आमाजस्तै मान्थेँ र उहाँको समस्या देख्दा कसरी सेवा गरूँ जस्तो लाग्थ्यो । आमाका लागि राति सुत्ने सहयोगी चाहियो भनेर उहाँकै छोराले भन्नुभएको थियो । मैले एउटी वृद्ध आमालाई सघाएको मात्रै हुँ । के भयो यस्तो ?'
क्यान्सरले गिजोलेको शरीरलाई भित्तामा अडेस लगाउँदै उहाँले मलाई बारम्बार आग्रह गरिरहनुभयो, 'बाबु, दिलशोभा नानीमाथि वज्रपात भयो, त्यो पनि मेरो कारणले, हे भगवान् !' उहाँले धेरैपटक भगवान्को नाम लिनुभयो । म चुपचाप सुनिरहेँ । उहाँकी जेठी बुहारी आइपुग्नुभयो, उहाँलाई सुत्न सजिलो बनाइदिनुभयो । उहाँका अनुसार दिलशोभा बारेमा समाचार आएदेखि उहाँ चिन्तित देखिन थाल्नुभयो रे । राधिका माले मलाई भनिरहनुभयो, 'बाबु, दिलशोभा नानीमाथि लगाइएको आरोप सबै झुटा हुन्, यो कुरा सबैलाई थाहा दिनु, नत्र मैले पापै-पापको आहालमा पौडनुपर्नेछ ।' सक्दो गरौंला भनेर म त्यहाँबाट बाहिरिएँ ।
(भण्डारी डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माता हुन् ।)
विजय कुमारद्वारा लिखित आरोप 'प्रमाणित भएन भने' शीर्षकीय आलेख ज्यादै मर्मस्पर्शी र पत्रकारिताको धर्मअनुरूप तटस्थ भएर लेखिएको भन्ने लाग्यो । कान्तिपुर दैनिकका पाठक पत्रहरूमा बडो प्राथमिकता दिएर छापिएका दिलशोभा श्रेष्ठसँग सम्बन्धित टिप्पणीहरूले मन उद्वेलित भइरहेकै सन्दर्भमा उक्त विश्लेषणात्मक आलेख पढेपछि झनै छटपटायो । दोहोरो संवादहीन फोन रेकर्डिङ सुनेका हामी दूरदराजमा बस्ने मानिसलाई यसले स्तब्ध तुल्याएको थियो र अनपेक्षित घटनाको प्रसारणले मुटुलाई चिमोटेको थियो ।
अझ डलरवाला कथित एनजीओ र आइएनजीओहरूको मौसमी भावुकता साँच्चै नै उच्चाटलाग्दो पनि लाग्यो । यदाकदा बाल आश्रमहरूमा हुने गरेका यौनशोषण र बेचबिखनका प्रकरणहरूले दिलशोभामाथि गहिरो शङ्का पनि जन्मायो तर एकोहोरो संवादमा आधारित उक्त रेकर्डिङ मानवता, नैतिकता र निःस्वार्थ सेवा गरिरहेका दिलशोभाजस्ता तमाम उदारमना व्यक्तिहरूको मुटुलाई नै मरुभूमिमा परिणत गर्ने गरी सङ्गीन आरोप लगाउनका लागि पर्याप्त थिएन । यस्तो बच्कना एवं हल्का रूपमा लिने सञ्चारगृहका कारण आज फेरि सेवा समर्पण त्याग, इमानदारी र उपकारजस्ता शब्दहरूमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सडक बालबालिका देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्दै हिंड्ने बालअधिकारकर्मी र गृहप्रशासनले जेनतेन दिलशोभाले झैं भरणपोषण र शिक्षा दिइरहेका व्यक्ति वा संस्थाहरूले सोच्नै पर्ने भएको छ ।
आपmनो मनोसन्तुष्टिकै लागि वृद्ध, अशक्त, अनाथ बालबालिकाहरूलाई भरणपोषण र रेखदेख गर्दै आएका अनगिन्ती व्यक्तिहरूले पनि दर्ता नगरेकै भरमा कारबाही भोग्नुपर्ने दिन आए भने उनीहरूले आफूले गरिरहेको सेवा बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । यसबाट फेरि पनि ती असहाय वृद्धवृद्धाहरू र अनाथ बालबालिका सडकमा आश्रय लिन बाध्य हुनेछन् । सरकार तिनको उचित भरणपोषण गर्ने कुरामा अनुत्तरदायी रहने अनि एनजीओ आईएनजीओ पनि चर्चामा आउनकै लागि मात्र उद्धार गर्दै हिंड्ने रवैया प्रत्युत्पादक देखिन्छ । दिलशोभाले गल्ती गरेको भए कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ, आइन्दा कसैले यस्तो हर्कत गर्नै नसकोस् तर आरोप पुष्टि भएन भने आरोप लगाउनेमाथि पनि सजाय हुनुपर्छ ।
कावासोती, नवलपरासी - source Ekantipur, Image channel